MintBackup: तपाइँको प्याकेजहरूको एक बैकअप बनाउनुहोस् लिनक्सबाट
MintBackup: तपाइँको प्याकेजहरूको एक बैकअप बनाउनुहोस्
linuxmint प्रदान गर्दछ मिन्ट ब्याकअपकागजातहरू, फाईलहरू, फोल्डरहरू र सबै सबैको ब्याक अप गर्नका लागि एक उत्कृष्ट उपकरण सफ्टवेयर हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा स्थापना गरेका छौं।
यो वास्तवमा बनाउँदैन जगेडा स्थापित प्याकेजहरूको, तर यसले सूचीमा फाईलमा निर्यात गर्दछ जुन हामी पछि उही प्याकेजहरू पुनर्स्थापित गर्न प्रयोग गर्दछौं। यो उपयोगी छ यदि हामीले हाम्रो कम्प्युटर फर्म्याट गर्नुपर्दछ, किनकि हामीले यो याद गर्नु पर्दैन कि हामीले पहिले स्थापना गरेका थियौं। यस उपकरणलाई हेरौं
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, इन्टरफेस एकदम सरल छ। हामीसँग शीर्षमा दुई विकल्पहरू छन्:
फाईलहरूको जगेडा सिर्जना गर्नुहोस्।
चयनित सफ्टवेयरको जगेडा सिर्जना गर्नुहोस्।
प्रत्येकको तल, यसको सम्बन्धित बहालीको साथ विकल्प:
फाईलहरू पुनर्स्थापित गर्नुहोस्।
चयनबाट सफ्टवेयर पुनर्स्थापना गर्नुहोस्।
1 एउटा सेभ फाईल सिर्जना गर्दै।
2 बचत गरिएको फाईलबाट पुनःस्थापना गर्दै।
3 फाईलहरू बचत गर्दै।
एउटा सेभ फाईल सिर्जना गर्दै।
यदि हामी क्लिक गर्दछौं ब्याकअप सफ्टवेयर चयन हामीले यसको केहि प्राप्त गर्नुपर्छ:
हामी फोल्डर छनौट गर्दछौं जहाँ हामी ब्याकअप फाइल बचत गर्न चाहन्छौं र अर्को चरणमा अगाडि बढ्छौं (अगाडि).
यस उपकरणको बारेमा साँच्चिकै ठूलो कुरा भनेको हामी कुन प्याकेजहरू बचत गर्न चाहन्छौं चयन गर्न सक्दछौं। यो सिफारिस गरिन्छ कि हामी ती सबैलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा बचत गर्दछौं, यदि हाम्रो प्रणाली सही ढ correctly्गले काम गर्दछ भने।
हामी स्वीकार्छौं (निवेदन गर्नु) y मिन्ट ब्याकअप यो प्रारूपको साथ चयनित फोल्डर भित्र एक फाईल सिर्जना गर्दछ: सफ्टवेयर_सेलेक्शन_होस्ट @ २०११-०१-२०१०-१०2011-- प्याकेज।लिस्ट.
बचत गरिएको फाईलबाट पुनःस्थापना गर्दै।
पुनर्स्थापना गर्न हामी क्लिक गर्दछौं सफ्टवेयर पुनर्स्थापना गर्नुहोस् एक चयन बाट (सफ्टवेयर चयन पुनर्स्थापित गर्नुहोस्) र फाईल कहाँ छ भनि पत्ता लगाउन हामीलाई सोध्दछ सफ्टवेयर_सेलेक्शन_होस्ट @ २०११-०१-२०१०-१०2011-- प्याकेज।लिस्ट। जुन हामीले पहिले बचत गरेका थियौं।
हामी फाईल चयन गर्दछौं र अर्को चरणमा जारी राख्छौं, जहाँ मिन्ट ब्याकअप यसले हामीलाई कुन प्याकेजहरू स्थापना गर्न चाहन्छौं भनेर देखाउनेछ (यो हामीले सक्षम गरेका रिपोजिटरीहरूबाट गर्छ).
दुईवटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्दछ:
यदि सफ्टवेयर पुनर्स्थापित गर्न पहिले नै स्थापित छ भने, मिन्टब्याकले यसको बारेमा केही गर्दैन, यसले मात्र हामीलाई सूचित गर्दछ कि सबै चीज सफलतापूर्वक समाप्त भएको छ।
यदि हामी Gdebi वा Dpkg प्रयोग गरेर म्यानुअल तरीकाले प्याकेज स्थापना गर्छौं, मिन्टब्याकअपले यसलाई स्थापना पनि गर्दैन।
यो पछि सुधार हुन सक्छ, तर अहिलेका लागि यो यस्तो काम गर्दछ।
फाईलहरू बचत गर्दै।
यदि हामी के चाहन्छौं भने हाम्रो फाईलहरू बचत गर्नु हो भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं बाह्य उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्, वा हार्ड डिस्क प्रयोग गरिको भन्दा उही वा उही क्षमताको साथ। मिन्ट ब्याकअप यसले के गर्छ हामीले प्रतिलिपि गर्ने फोल्डरमा हामीले बचत गर्न चाहेको प्रतिलिपि हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » MintBackup: तपाइँको प्याकेजहरूको एक बैकअप बनाउनुहोस्
यो कार्यक्रम APTONCD जस्तै हो?
के म इन्टरनेटको आवश्यकता बिना प्रोग्राम स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सक्दछु?
ह्यान्सेललाई जवाफ दिनुहोस्
L सेकेन्डमा हाम्रो LMDE प्याकेजहरू कसरी स्थापना गर्ने
एन्ड्रोइड ट्याब्लेट फ्लाई भिजन